အူလမ်းကြောင်းကောင်းမွန်စေရန်အစားအစာ ၅ မျိုး Bezzia
တောရက်စ် | 13/09/2021 16:00 | အစာအာဟာရ
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်အူလမ်းကြောင်းကောင်းရန်အရေးကြီးသည်။ အကြောင်းမှာခန္ဓာကိုယ်မှအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် သို့မှသာအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်မရ။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းသည်လိပ်ခေါင်းရောင်သို့မဟုတ်စအိုကွဲခြင်းကဲ့သို့အခြားရောဂါများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မစင်မှတဆင့်သဘာဝအလျောက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုနှစ်သက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အစာအိမ်လမ်းကြောင်းကိုကောင်းမွန်စေရန်ကွဲပြားခြားနားသော၊ မျှမျှတတနှင့်ကျန်းမာသောအစားအစာကိုလိုက်နာရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အမျှင်ဓာတ်သည်အချဉ်ဓာတ်များသောအစားအစာများ၊ ရေဓါတ် (သို့) အဆီကဲ့သို့အခြားအရာများသည်အကူးအပြောင်းကိုအထောက်အကူပြုသောကြောင့်တစ်ခုတည်းသောအာဟာရဓာတ်မဟုတ်ပေ။ မင်းရဲ့အူလမ်းကြောင်းကူးပြောင်းမှုကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်လဲသိချင်ရင် နေ့တိုင်းကယ်ထုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ဤအစားအစာများကိုသင်၏အစားအစာတွင်ထည့်သွင်းရမည်.
1.3 Oat အလွှာ
1.5 Flax နှင့် chia အစေ့များသည်အူလမ်းကြောင်းကူးပြောင်းမှုကိုတိုးတက်စေသည်
အစားအစာအပြင်ရေဓါတ်သည်ဤညီမျှခြင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္မှပါဝင်သည်။ အစာခြေစနစ်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာခန္ဓာကိုယ်မှအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရန်မစင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပုံစံများအရအူမကြီးသည်ရေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးခိုင်မာစေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကလုံလောက်တဲ့ရေဓာတ်မရတဲ့အခါ မစင်သည်အလွန်မာပြီးခြောက်သွေ့လာပြီးသွားရန်ခက်ခဲလာသည်.
ရေဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဝမ်းချုပ်ခြင်းထို့ကြောင့်အစာအိမ်လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကောင်းသောအလေ့အထများကိုချမှတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤသို့ဖြစ်လျှင်ဝမ်းချုပ်ခြင်းသည်နာကျင်ခြင်း၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ၊ စအိုကွဲခြင်းနှင့်ဝမ်းချုပ်ခြင်း၏ပုံမှန်မသက်မသာဖြစ်ခြင်းများပေါ်လာနိုင်သည်။ တစ်နေ့လျှင်ရေ ၂ လီတာသောက်ခြင်းသည်အူလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းကောင်းမွန်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်၏အစားအစာတွင်ဤအစားအစာများအပြင်.
သဘာဝအမျှင်ဓာတ်၊ ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်အရင်းအမြစ်များ၊ သစ်သီးများသည်မည်သည့်ကျန်းမာသောအစားအစာတွင်မဆိုမပျောက်ပျက်နိုင်သောအစားအစာဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်အကောင်းဆုံးမှာကီဝီ၊ ဇီးသီး၊ လိမ္မော်သီးနှင့်ပန်းသီးများဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကီဝီသီးသည်ပုံမှန်ဝမ်းချုပ်နေသူများအတွက်အလွန်အကြံပြုထားသောအစားအစာဖြစ်သည်။ ဒီအသီးမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝပြီးသဘာဝ prebiotic တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နံနက်စာအတွက်နံနက်တိုင်းကီဝီသီး ၂ လုံးစားပါ သင်ပုံမှန်အသွားအလာရှိလိမ့်မည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာတစ်ခုတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအမျှင်ဓာတ်များ၊ ဗီတာမင်များနှင့်သတ္တုဓာတ်များကြွယ်ဝသောအစားအစာများဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အသွားအလာတိုးတက်ဖို့အတွက်အထူးအကြံပြုထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှိရင်တော့အဲဒါကပဲတီစိမ်းပဲ။ ဤအရာများသည် ပျော်ဝင်နိုင်သောအမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းသည်အူလမ်းကြောင်း microbiota အတွက်အစာဖြစ်သည်.
ယေဘူယျအားဖြင့်အစေ့အဆန်များသည်အူလမ်းကြောင်းကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်သော်လည်းအထူးသဖြင့် oats သည်၎င်း၏များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်လိပ်ထားသော oat များသည်ပျော်ဝင်နိုင်သောအမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်သဘာဝ prebiotic အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ အုတ်ဂျုံမှုန့်များကိုမှာယူနိုင်ပါတယ် မနက်စာကိုဒိန်ချဉ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ သင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်းတဲ့နေရာမှာရောစားပါ.
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုရွှေအရည်အဖြစ်လူသိများပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပျိုစင်သံလွင်ဆီသည်အာဟာရအလေးစားဆုံးအစားအစာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစာခြေစနစ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည် fecal bolus ကိုချောစေပြီး၎င်းကိုစအိုမှတဆင့်ထုတ်ပစ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဆီကိုယူရမယ် အသုပ်များတွင်အအေးသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအရသာထည့်ရန်တစ်နေ့လျှင်အပျိုစင်သံလွင်ဆီ ၄ ဇွန်းမှ ၆ ဇွန်းကြားသည်မှန်ကန်သောအူလမ်းကြောင်းပြောင်းရန်လုံလောက်သည်။
Flax နှင့် chia အစေ့များသည်အူလမ်းကြောင်းကူးပြောင်းမှုကိုတိုးတက်စေသည်
၎င်းတို့ကိုကျန်းမာရေးအတွက်များစွာအကျိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများအတွက်စူပါအစားအစာများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ ၎င်းတို့တွင်အူလမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းကိုတိုးတက်စေသည်။ အစေ့များစိမ်သောအခါ၊ mucilage ဟုခေါ်သောအပင်ဓာတ်ကိုထုတ်လွှတ်သည်မရ။ ဤဓာတ်သည်အူလမ်းကြောင်းသန့်ရှင်းရေးနှင့်အူလှုပ်ရှားမှုကိုအားပေးသည်။
သင်၏အစားအစာတွင်ဤအစားအစာများအပြင်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပရိုတိန်း၊ ပဲမျိုးစုံ (သို့) အဆီကဲ့သို့သောအခြားအလွန်ကျန်းမာ။ လိုအပ်သောအစားအစာများကိုထည့်သွင်းခြင်းအပြင်သင်၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အနည်းငယ်ကိုထည့်သွင်းသင့်သည်။ လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် အူ။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်ရေဓါတ်၊ အာဟာရနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းသည်အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးကောင်းရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » အစာအာဟာရ » အူလမ်းကြောင်းကောင်းမွန်စေရန်အစားအစာ ၅ မျိုး